Meditation is science of mind. It offers an alternative to the purely spiritual values of life. It isameans of harmonizing or resolving the apparent conflict between the spiritual and material aspects of living. The basic objective of meditation is to enable an individual to become in outer manifestation what he or she is in inner reality. Meditation leads along the path of becoming, towards the spiritual talent to be, to know, and to do. This paper is intended to provide some accounts of exchange between Buddhism and western science how mind works and the contemplative Buddhist meditation could prove beneficial for human beings.
Science and Meditation E-Book 60.63 KB Download 653
ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ အလိုတော်ပြည့်ပ၀ါရဏာ သြ၀ါဒခံယူပွဲနှင့် အာစရိယဂုဏပူဇာ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြုစုသော အလိုတော်ပြည့်အလင်းရောင် သာသနာပြုမှတ်တမ်းစာစောင်ကို ၂၀၁၀ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက်၊
အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်တွင် စတင်ဖြန့်ချီနေပြီဖြစ်သည်။ ယင်းစာစောင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြသော ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရှိတပည့် ဒကာ/ဒကာမ များနှင့် ဦးကုမာရ (ခ) ဦးဇင်း ဘီလူး နှင့် ဦးပညာဇောတ စစ်တွေ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက် နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ ဦးညာဏော အကြုံပြုခဲ့သော ဘူးသီးတောင် အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် နှင့် ပြည်ပရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဒကာကျော် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိဒကာလေးတို့အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
ကျေးဇူးတော်ရှင်အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီး၏ သြ၀ါဒခံ ကျောင်းများမှ ကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယကများအားလည်းကောင်း၊ စာမူချီးမြှင့်ကြသော စာမူရှင်များအားလည်းကောင်း စာစောင် စာတည်းအဖွဲ့မှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ယင်းစာစောင်အတွက် ကုန်ကျငွေများကို ရန်ကုန်မြို့နေ ဦးကိုကိုလွင် (ရွှေငါး) ဒေါ်သန်းသန်းရှိန် မိသားတစ်စုမှ ဓမ္မဒါနပြုပါသည်။ နတ်လူသာဓုခေါ်ပါစေသောဝ်။ လည်းကောင်းစာအုပ်အား အလိုတော်ပြည့်ဝက်ဘဆိုက်မှ မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလည်းကောင်းစာအုပ်အား (E-Book) တွင်ဖော်ပြထားပါတယ် ဆိုတော့ မိမိတို့ဖက်ရူလို့ပါက (Download) ဆွဲယူနိုင်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
အလိုတော်ပြည့်အလင်းရောင် သာသနာပြုမှတ်တမ်းစာစောင် မဂ္ဂဇင်းထွက်ရှိ 291.8 KB Download 1477
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့အောင်မြေဗောဓိဓမ္မရိပ်သာ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော
ကထိန်ဒါယကာ ဦးဝင်းမောင် ဇနီး ကထိန်ဒါယိကာမ ဒေါ်စောလိူင် မိသားစုတို့ ၏ ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲတွင်
ပြည်တွင်း ပြည်ပ သာသနာပြု ကျေးဇူးတော်ရှင် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားအပ်သော ကထိန်အနုမောဒနာ
ကထိန်အနုမောဒနာတရားတော် 57.74 KB Download 734
၂၀၀၉ ခုနစ် ရန်ကုန်မြို
ဝေဒနာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်ရူမှတ်နည်း တရားတော် 4.28 MB Download 1014
၀ိသုဒ္ဓိခုနစ်ပါးအခြေခံအလုပ်းပေးတရားတော်အပိုင်း(၁) 155.55 KB Download 714
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ကာလကတ္တားမြို့ဗောဓိသုခ အလိုတော်ပြည့်ဓမ္မရိပ်သာ၌
၀ိပဿနာဥာဏ်နှစ်ပါးတရားတော် 244.32 KB Download 766
အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော ဆဆက္ကသုတ္တန် ၀ိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော် (ဒုတိယတွဲ)
အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော ဆဆက္ကသုတ္တန် ၀ိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော် (ဒုတိယတွဲ) 5.2 MB Download 999
အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော ဆဆက္ကသုတ္တန် ၀ိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော် (ပထမတွဲ) 5.13 MB Download 889
အခြေခံ ကာယာနုပဿနာသတိဋ္ဌာန်ရူမှတ်နည်းများ 259.6 KB Download 948
၂၀၀၆ ခုနစ် ပြည်တွင်း ပြည်ပ သာသနာ အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ဟောကြားအပ်သော ဘ၀သစ္စာ အဖြေရှာ နှင့် သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ
ဘ၀သစ္စာ အဖြေရှာ နှင့် သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ ဟောစဉ်တရားများ 287.33 KB Download 768
ခြေတော်ရာသမိုင်းစာအုပ်-ဖတ်ရူနိုင်ပြီး 192.22 KB Download 1074